Iindaba -Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa usenza uyilo lwePakethe yokutya
Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa usenza uyilo lokuPakisha lokutya
Ukutya kubalulekile ebomini babantu. Uyilo olulungileyo lokupakisha ukutya alunakutsala kuphela ingqalelo yabathengi, kodwa lukwakhuthaza umnqweno wabathengi wokuthenga. Ke yeyiphi imiba ekufuneka ihlawule ingqalelo kuyilo lokupakisha ukutya?
Izinto ze-1 zokupakisha
Xa sikhetha izinto zokupakisha ukutya, kufuneka siqwalasele umba wokhuseleko nokhuselo lokusingqongileyo. Nokuba kukupakisha kwangaphakathi okanye ukupakisha kwangaphandle, kufuneka sinikele ingqalelo kukhetho lwezixhobo. Ngokuhambelana nomgaqo wokuqinisekisa ukhuseleko lokutya kunye nokukhusela okusingqongileyo, kufuneka sikhethe izinto ezinobungozi kwindalo kwaye zisempilweni.
Imifanekiso ye-2 yokupakisha
Iipateni ezibonakalayo ezibonakalayo zinokukhuthaza amandla abathengi okuthenga ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Umzekelo, ngokutya okulula kwabantwana, ezinye iipateni zekhathuni ezintle zinokuchongwa kuyilo lokupakisha, okanye abanye oonobumba bekhathuni abathandwa kakhulu ngabantwana.
Ukwazisa isicatshulwa yenye yezinto eziyimfuneko ekuyileni iipakethe. Nangona ukubonakaliswa kwesicatshulwa kungabonakali kakuhle kunemizobo, kuyacaca ngokucacileyo. Iindidi zokutya ezahlukeneyo zahlukile ekubonakalisweni kwamagama, ukongeza kuhlobo lokutya oluqhelekileyo, izithako, iilayisensi zeshishini lococeko, njl. Njl. thenga.
Ukukhetha umbala kubaluleke kakhulu ekupakisheni ukutya, imibala eyahlukeneyo izisa abantu kumava ahlukeneyo eemvakalelo. Xa sikhetha imibala, kufuneka silumke. Imibala eyahlukeneyo inokubonisa iimpawu zokutya ezahlukeneyo. Umzekelo, imimandla eyahlukeneyo kunye neentlanga zinemibala yazo eziyithandayo, kwaye imibala eyahlukileyo iyahluka ngokweendlela ezahlukeneyo zokuthanda. Ke kufuneka sidibanise iimpawu zokutya ngokwazo ukukhetha imibala yokupakisha.
Ukongeza koku kungasentla, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa kusenziwa uyilo lokupakisha, njengokukhuseleka kwinkqubo yokuhambisa ukutya, ukunqanda ukukhanya, njl., Zonke kufuneka zithathelwe ingqalelo.